အိမ်သူအိမ်သား | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
တီဗီ LCD "Lentel" ဆိုတာဘာလဲ။ ငါ 45 မိနစ်ခန့်ရပ်တည်ခဲ့သည်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, ဒါပေမယ့်သူကကြီးမြတ်ပြသထားတယ် ...
တီဗီ LCD "Lentel" ဆိုတာဘာလဲ။ ငါ ၄၅ မိနစ်လောက်ရပ်တယ်၊ သူတို့ကိုနာမည်ကောင်းတံဆိပ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကကောင်းတယ်။ ငါလုပ်ခဲ့တာကြာပြီ၊ အဲဒီအမှတ်တံဆိပ်ကိုငါမတွေ့ရဘူး။ ငါမင်းကိုအာမခံတယ် ...
အဝတ်လျှော်စက် LG ကအတွင်းစည်သန့်ရှင်းရေး function ကို enable လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကျွန်ုပ်၏ LG အဝတ်လျှော်စက်တွင်စည်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်မှုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမည်နည်း ထိုညွှန်ကြားချက်ထဲမှာဒီအကြောင်းဘာမျှမရှိသနည်း စက်တွင်ဤလုပ်ဆောင်မှုမရှိပါကမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမဖွင့်ပါ။ "Drum Clean mode သည်ရည်ရွယ်ပါသည်။
တီဗီကိုသော့ခတ်ခြင်းသည် Semichemical မီးဖိုများကဲ့သို့ကလေးများအတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အချက်အလက်စာရွက်တွင် # 10064; Set တွင်ရှိသည်။ # 10064; SMART စကားဝှက် # 10064; # 10064; # 10174; # 10064; settings ကို # 10064; # 10137; # 10064; သော့ခတ် # 10064; # 10137; # 10064; # 10064; password တီဗီစကားဝှက်ကိုနံပါတ် ၉၉၉၈ သတ်မှတ်ရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲရန်; စကားဝှက်နံပါတ် # 9998; 12300 # 0000; ။ ...
သူတို့ကလေအေးပေးစက်ကိုး၊ ခုနစ်လေအေးပေးစက်အကြောင်းပြောတဲ့အခါဘာကိုဆိုလိုသလဲနာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်များ၏လေအေးပေးစက်အားလုံးသည်စံချိန်စံညွှန်းမီနိုင်သောစွမ်းအင်ပမာဏကိုလိုက်နာကြသည်။ split-system မော်ဒယ်အများစုတွင်နာမည်ညွှန်း၌ပါဝါညွှန်းကိန်းပါရှိသည်။ ကီလိုဝပ်နှင့်မကိုက်ညီပါ။
အဘယ်သူသည်အခြားဘယ်အရာကိုအကြံပေး, zanussi ကရေပူစမ်းသင့်သလဲ
ဘယ်သူလို Zanussi ဓာတ်ငွေ့ရေပူပေးစက်ရှိသလဲ။ သင်ဘာနောက်ထပ်အကြံပြုချင်ပါသလဲ။ လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်က ၀ ယ်ခဲ့သောပစ္စည်းအားလုံးသည်ရောင်းရန်မရှိတော့ပါ။ ထုတ်လုပ်သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ "ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း" ထက်ရှေ့ကိုရောက်နေတယ်။
Smart TV လိုအပ်ပါသလား Smart TV မှာဘယ်သူရှိသလဲ။ ဒေါ်လာ ၃၀ တန်သောမီဒီယာဖွင့်စက်သေးသေးလေးတစ်ခုကသင့်အားမည်သည့်တီဗီကိုမဆိုစမတ်တီဗီ၏လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးနှင့်အခြားအရာများကိုတပ်ဆင်နိုင်စေမည်။ နှစ်…
သငျသညျကိုဘယ်လိုသိသလဲ ??? အဝတ်လျှော်စက်တွေ Air-ပူဖောင်း-type အမျိုးအစား? သူတို့ဘယ်လိုပုံမှန်အတိုင်းကှာခွားပါဘူး ???
ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ ??? ပူဖောင်းအဝတ်လျှော်စက်များ? သူတို့ဘယ်လိုပုံမှန်အတိုင်းကွာခြားသလဲ ဖြစ်ကောင်းလေပူဖောင်းပေါက်ကွဲမှု))))))))) ကုမ္ပဏီ DEU ၏အဝတ်လျှော်စက် 15 နှစ်ကျော်သစ္စာရှိရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ! ရေချိုးဖို့အချိန်အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်
တီဗီကို LG p42la662v ပိုကောင်း pothodit 3D ဘို့မဆိုစတီရီယို pair တစုံ?
တီဗီ LG p42la662v သည်မည်သည့်စတီရီယို pair တစုံသည် 3D အတွက်ပိုကောင်းသနည်း။ Q: Passive 3D ပါသော LG TV အတွက်မည်သည့် 3D ဗီဒီယိုသည်သင့်တော်သနည်း။ အဖြေ: 1 × 1920 ထက်မပိုသော resolution နှင့်အတူ stereopairs1080 ကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
ကောင်းသောဘေ့နှင့်အတူ prompt နားကြပ်
ကောင်းသော -bass bass Audio-Technica နှင့်အတူလျင်မြန်သောနားကြပ် ATH-CK303M ကောင်းသောနားများကျွန်ုပ်တွင်ရှိ Bluetooth Bluetooth နားကြပ်များ vstutkom ကိုကြည့်ပါ။ 2.1 ယူခဲ့ပါတယ်။ ငါစျေးပေါနှင့်ထိုအရပ်၌ဘေ့ရှာအံ့သြလောက်ရုံရှာမတွေ့ပါ။ တစ် ဦး
ငါသည်ငါ့အိမ်မှာအတွင်းအပြင်အားလုံးဒီဇိုင်း 60 VT ဖို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို LED မီးခွက်, chandeliers ဝယ်ဖို့ချင်
ငါ LED မီးလုံးတစ်လုံးဝယ်ချင်တယ်၊ ငါ့အိမ်ရှိ chandelier များအားလုံးကို ၆၀ ဝ ၀ အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ မေးခွန်းမှာအထဲမှာပုံမှန်အားဖြင့် incandescent lamp ကို LED ဖြင့်အစားထိုးသောအခါ LED lamp ၏စွမ်းအားသည် 60 ဖြင့်မြှောက်ထားသော်လည်းမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ...
ဘယ်မှာ sais အခမဲ့စုတ်တံကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်
sai အတွက်စုတ်တံများကိုမည်သည့်နေရာတွင်အလကားရရှိနိုင်သည်ကိုသင် SAI အတွက် brushes များဖန်တီးနိုင်သည်။ အခြေခံစုတ်တံများသည် SAI ကိုယ်တိုင်တည်ရှိသည့်နေရာတွင်ရှိသည် (နေရာ - နေရာ - SAIEasy Paint Tool SAIelemap တည်ရှိသည်) ။ .BMP ဖိုင်များစွာရှိသည်။ ၁ ။
ဘယ်တီဗီကိုဝယ်သင့်လဲ။ Philips ကအရေးမကြီးပါဘူး TV signal သည်အရည်အသွေးမြင့်တယ်၊ ဒီဂျစ်တယ်တီဗီရုပ်ပုံကောင်းတယ်၊ analog TV signal နဲ့မတူဘဲငါမှာ3ရှိတယ်။
အဘယ်ကြောင့်အရေးပေါ် circuit ကိုအနိုင်အထက်ဘို့လိုအပ်ကြောင်း?
များအတွက် difavtomat ကဘာလဲ? ၎င်းသည်တိုတောင်းသော circuit breaker နှင့် RCD တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းသည် overload နှင့် electric shock တို့မှကာကွယ်ရန်အတွက်လိုအပ်သည်။ Difavtomat သည်အတိုကောက်အမည်ဖြစ်သည်။
အလူမီနီသို့မဟုတ်လှဲချသံမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း induction မီးဖိုများအတွက်သင့်လျော်သောပါသလဲ
လူမီနီယမ်လား၊ သို့မဟုတ်သံမဏိပစ္စည်းများသည် induction hob တစ်ခုအတွက်သင့်တော်သလား။ နိယာမအားဖြင့်သံမဏိမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းသည် induction cookers များအတွက်ကောင်းသော်လည်း၊ တင်သွင်းသောသံမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
Husqvarna chainsaw သို့မဟုတ်တည်ငြိမ်သောအဘယ်အရာပိုကောင်း?
ဘယ် chainsaw သည် Husqvarna သို့မဟုတ် Calm ထက်သာသနည်း။ ငါ့အဘို့, Husqvarna သာ။ ကောင်း၏, ဒါပေမယ့်အမှတ်တံဆိပ်အပိုဆောင်း (ဆီ) ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဆင်သင့်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုလည်းကောင်းသော်လည်း Husqvarna သည်သစ်သားများများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ငါ့ကိုရန်ထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းတစ်ခုကို ...
LG.mashinka ဆွဲထားသည့်အဝတ်လျှော်စက်၏ခင်းကျင်းပြသကြောင်း CL အက္ခရာများကိုဆိုလိုတာ။
LG အဝတ်လျှော်စက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် CL အက္ခရာများဘာကိုဆိုလိုသလဲ။ ဒါဟာအမှားမဟုတ်ပါဘူး CL - ကလေးများသော့ခတ် (ကလေးများမှသော့ခတ်ခြင်း) နောက်ဆုံးတွင်ညွှန်ကြားချက်များကိုလက်ဖြင့်ကိုင်။ ဖတ်ပါ။ အဝတ်လျှော်စက်အမှားများ ...
ဘယ်မှာပန်းကန် Multivarki Panasonic က SR-TMH18 ကိုဝယ်ခြင်းငှါငါ့ကိုပြောပြပါ,
Panasonic multicooker SR-TMH18 အတွက်ပန်းကန်တစ်ခုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲပြောပြပါ၊ မင်္ဂလာပါ၊ တစ်နေရာရာမှာပန်းကန်တစ်လုံးကိုသင်ရှာတွေ့ခဲ့တာလား။ ငါရှာနေတာလည်းငါရှာလို့မရဘူး ((တူညီတဲ့အခက်အခဲ - ပန်းကန်လုံးထဲမှအစက်အပြောက်များ)
အဘယ်ကြောင့်တီဗီအတွက် Hertz ကတစ်လိမ်လည်မှုနှင့်စျေးကွက်ကြောင်းပြောပါ ???
ရုပ်မြင်သံကြားမှ HERZ သည်လိမ်လည်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူတို့အဘယ်ကြောင့်ပြောဆိုကြသနည်း။ အထူးကျွမ်းကျင်သူများ၏ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆန့်ကျင်မှုများမရှိပါ - အမှန်မှာ၊ တီဗီများအကြားပုံရိပ်တွင် hertz ၁၀၀ နှင့် ၁၀၀ ကိုထောက်ပံ့ပေးသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါသည်။
ခြားနားချက်အနိမျ့နှင်းခဲမျှ fost နှင့်ရေခဲသေတ္တာယို system ကိုအအေးခံခြင်းဆိုတာဘာလဲ? လက်လှမ်းဘာသာစကားဖြစ်နိုင်သလား?
နှင်းခဲအနိမ့်အမြင့်၊ အဘယ်သူမျှမမီးနှင့်ရေခဲသေတ္တာ၏ယိုအအေးစနစ်တို့အကြားမည်သို့ကွာခြားသနည်း။ လက်လှမ်းမှီတဲ့ဘာသာစကားသုံးလို့ရမလား။ No Frost သည်ခေတ်မီနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးပစ္စည်းကိရိယာများသည်ရေခဲသေတ္တာကိုအေးခဲစေသည့်နံရံများ၊ အလိုအလျောက်အေးခဲစေခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်သောအအေးများကိုအာမခံပေးသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်သည်။
LG ကရေခဲသေတ္တာ။ စာလုံးကိုပုံဖော်ခြင်း။
ရေခဲသေတ္တာ LG ။ ကုဒ်ဖြုတ်ခြင်းအက္ခရာများ။ ရေခဲသေတ္တာ LG ယနေ့ခေတ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးရေခဲသေတ္တာတစ်ခုမှာ ၃၉၉ စီးရီးဖြစ်သည်။ ဤစီးရီးရှိရေခဲသေတ္တာများသည်လိုင်းအတွင်းရှိအရာအားလုံးကဲ့သို့ပင်ရေခဲခြင်းကိုမလိုအပ်ပါ။ ရဲ့အမှတ်အသားကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြပါစို့ ...
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 11 Next ကို 's Page
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,173 စက္ကန့်ကျော် Generate ။